नेपालमा सेनिटाइजर कम्पनिले मान्छे मा’र्दै, ? प्रहरीले हान्यो छापा, हेर्नुहोस् होसियार हुनुहोस् – News543Online
नेपालमा सेनिटाइजर कम्पनिले मान्छे मा’र्दै, ? प्रहरीले हान्यो छापा, हेर्नुहोस् होसियार हुनुहोस्
May 23, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमा सेनिटाइजर कम्पनिले मान्छे मा’र्दै, ? प्रहरीले हान्यो छापा, हेर्नुहोस् होसियार हुनुहोस्
यस्ता नक्कली सेनेटाइजर बनाएर बेच्ने असती हरुलाइ कार्बाही होस? नेपालमा सेनिटाइजर कम्पनिले मान्छे मा’र्दै, ? प्रहरीले हान्यो छापा, हेर्नुहोस् होसियार हुनुहोस्
को’रोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि आयो खुशीको खबर ! को’रोना भाइरसबाट सङ्क्र’मित बिरामीका लागि अत्यावश्यक रहेको अक्सिजन आपूर्ति ९५ प्रतिशतले व्यवस्थापन भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा।जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।हा-हाका’रनै मच्चिएको थियो तर सबैतिरबाट व्यवस्थापन भएकाले ९५ प्रतिशत समधान भएको छ ।
आउने साताभित्र शतप्रतिशत आपूर्ति हुनसक्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । ओमानबाट ५६० थान र चीनबाट दुई हजार थान सिलिण्डर सरकारले ल्याएको छ भने निजी कम्पनीहरुले समेत सिलिण्डर ल्याएकाले चार हजारभन्दा बढी सिलिण्डर भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
१८ हजार सिलिण्डर ल्याउने अन्तिम तयारी भएकाले यो साताभित्र अक्सिजनको समस्या सबै हल हुने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । यो खबर हिजाेकाे गोरखापत्र दैनिकमा रहेकाे छ ।काे-भिड १९ बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश।
महामारीमा पनि चुनाव गर्न सकिन्छ, अमेरिकामा पनि भएको थियो : प्रधानमन्त्री ओली
एक डाक्टरको कथा, जो संक्रमितलाई घर–घर पुगेर उपचार गर्छन्
बरु एमाले बन्छु माओवादी केन्द्रमा फर्कन्न – गृहमन्त्री बादल (सहि कि गलत ? पुरा पढ्नुहोस
भारतीय चोरले लुटेका भैँसी सशस्त्र प्रहरीले फिर्ता ल्यायो !